Pringles: Ihe niile malitere na kuki wee na-aga n'ihu na oche oche robot - Magazine System Magazine
в Akụkọ Mmeri, Ntughari
N'ihe, akpọrọ ibe Pringles ogologo oge kuki, ebe ọ bụ na ọdịnaya nduku na ha dị obere - naanị 42%, ndị ọzọ bụ ntụ ọka na stachi. N'ihi usoro a jikọtara ọnụ, Procter & Gamble, nke nwere akara ahụ ruo 2011, jisiri ike zere ịkwụ ụtụ isi na-arịwanye elu ruo ogologo oge, ọ dị oke ọnụ ịmịpụta ibe na UK.
Na 1956, onye ọrụ Procter & Gamble Alexander Liepa, onye bụ ọkachamara site na ọrụ, wee nweta usoro maka ibe ndị a. Mana o were ya ọtụtụ afọ iji mee ka ọ zuo oke ma chọọ itinye ego, yabụ Pringle's Newfangled Potato Chips apụtaghị na ahịa North America ruo Ọktọba 1968.
$40M sitere n'aka onye na-eme ice cream nduku vegan
Enwere ike ịhazi starch nduku ugbu a nke nta nke nta
Dị ka otu nsụgharị si kwuo, aha ahụ bịara na mberede. Ndị ọrụ Procter & Gamble mebiri isi ha na-anwa imepụta ya. Offọdụ n'ime ha, n'ime akwụkwọ ndekọ aha ha, hụrụ aha Pringle Drive, nke dị n'obodo Cincinnati, Ohio. E nwere akụkọ ọzọ - a na-akpọ mkpụrụ ego ahụ Mark Mark Pringle, onye na 1937 chọrọ ụzọ ọhụrụ iji dozie poteto. Bụrụ na ọ nwere ike, aha Pringles nwere mmasị na njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ ma kwadoro ya.
Na Mee 2009, Courtlọikpe Kasị Elu nke London kpebiri ibe ka ọ bụrụ nduku, ya mere, Procter & Gamble ga-akwụ £ 100m ($ 156m) na ụtụ isi agbakwunyere na afọ ole na ole mgbe erere mkpụrụ ego ahụ dị ka nri na UK, yana ịkwụ ụgwọ n'ọdịnihu. £ 20 nde kwa afọ.
Na 1994, UK tinyere iwu na-ehiwe usoro maka ịtụ ụtụ agbakwunye uru. Dabere na iwu a, enweghị ụtụ isi n'ọtụtụ nri na mba ahụ. Naanị ihe ndị a bụ ngwaahịa sitere na poteto, gụnyere French fries, ibe na ihe ndị yiri ya. Ruo ọtụtụ afọ, Procter & Gamble ekwuola na ibe ya nwere obere poteto a ga-atụ ụtụ.
Na 2011, Procter & Gamble kpebiri ire ikike nke Pringles ika na Diamond Foods Inc, na-akwụ ya ụgwọ ruru ijeri $ 2,35. Mana maka ụfọdụ ebumnuche amaghị, azụmahịa ahụ emezughị. Agbanyeghị, na 2012, Kellogg's, onye isi na-emepụta nri na United States, zụtara akara ahụ maka ijeri $ 2,7.
Na 2018, onye na-eme nri ngwa ngwa nke Kellogg na Vietnamese Acecook jikọrọ aka weta noodles ozugbo n'ahịa, nke a na-akpọ Pringles, ya na Julius Pringle a ma ama na nkwakọ ngwaahịa ahụ. Na mbu, a na-ere nudulu naanị na Japan, wee pụta na United States.
Na Febụwarị 2020, Kellogg sooro Gravitonus, nkewa WARP, iji webata oche egwuregwu Feeder. O nwere mgbaaka mgbatị ahụ, ọ na-enyocha omume nke gamer ma ziga data na ngwa pụrụ iche. Dabere na ha, usoro ihe omume a na-agbakọ ezigbo ụda nke egwuregwu maka onye nwe ya. Tụkwasị na nke ahụ, a na-etinye ogwe aka robotic n'elu oche ahụ, nke na-eweta ibe ya n'ọnụ onye ọkpụkpọ ahụ mgbe agụụ na-agụ ya.
Taa A na-ere Pringles na mba 140 gburugburu ụwa. Maka nke ọ bụla n'ime ha, ndị ahịa Kellogg ewepụtala akara nke ibe a.
Tags: Ekeibe n'ibeibe
Onye na-eme ice cream Vegan Eclipse Foods ewepụtala $40 nde ma ga-amalite imepụta mmiri ara ehi ọzọ, ka TechCrunch siri kwuo. Ụlọ ọrụ ahụ na-eji ego a na-enweta na ...
Ndị ọkà mmụta sayensị si Singapore ewepụtala nkà na ụzụ nhazi nduku ọhụrụ nke nwere ike ime ka ahụ mmadụ na-agbari starch nduku nwayọọ nwayọọ.
A ga-emepụta poteto cherry na Tolochin Cannery
Tolochin Cannery na-aga n'ihu na ngwaahịa ọhụrụ na-atọ ụtọ. N'ime ogbako maka imepụta fries french nke kpọnwụrụ akpọnwụ, ha gara n'ihu na-agbasa ahịrị ngwaahịa ahụ, na-akọ ...
Usoro maka ịmepụta plastik gburugburu ebe obibi site na mkpofu nduku
Dị ka òtù America na-anaghị akwụ ụgwọ bụ Plastic Oceans International si kwuo, a na-atụba ihe karịrị tọn 10 nde rọba n'ime oké osimiri kwa afọ. Dị ka National...
E tinyere ụlọ nkwakọba ihe maka ịchekwa akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ na mpaghara Moscow
Ewubere ụlọ nkwakọba ihe maka nchekwa nke ngwaahịa ọrụ ugbo na ngụkọta nke 17,6 puku sq.m. n'ime ime obodo Rybolovskoye nke mpaghara obodo Ramensky. Ikike...
E zigara ogbe mbụ nke fries french sitere na cannery Tolochin na Kazakhstan
Ulo oru nke mpaghara Vitebsk (Belarus) - Tolochin cannery - ezigara batch mbụ nke fries french na Kazakhstan na nso nso a, na-akọ ozi na nyocha ...
Gọọmenti kwadoro imepụta nyocha na mmepụta agrotechnopark na Chuvashia
Sistemụ nduku dere na mbụ gbasara atụmatụ iji wuo nyocha na imepụta agrotechnopark. Ihe okike ya na Chuvashia ga-abawanye mmepụta nduku site na ugboro 2,5....
Mgbe mkpesa gbasara mmụba nke ọnụahịa nduku, a kpọrọ onye bi na Kuzbass ka ọ bụrụ onye ozi
Uzbekistan mụbara mbupụ nke akwụkwọ nri oyi kpọnwụrụ